कस्को हो यो मोबाइल नम्बर ? « नेपाली मुटु
« काम पर्दा भाँडो, काम नपर्दा ठाँडो
गुरुकुलमा सपनासँग एकछिन »
नेपालका टेलिकमले चोरीको कलबाट बर्षेनी करोडौ रुपैया गुमाउँनु परेको कुरा हामी प्रशस्त सुन्न पाउँछौ । यो कसरी हुन्छ प्राबिधिक कुरा भयो । यस बारे मलाई जहाँ सम्म थाहा छ, यो चोरी रोक्न नेपालका टेलिकमहरु प्रयासरत छन् । यसका लागि पर्याप्त काम भएका नभएपनि केहि कामहरु भने भइ नै रहेका छन् । यसलाई अझ गतिशिल रुपमा गर्नु अतिआवश्यक छ नै । अतः देशको सचेत नागरिक भएको हैसियतमा यो चोरीबाट सजग रहनु र थाहा पाएको जानकारीलाई सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउँनु हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ । तर घटना र दुर्घटनाहरु यसरी दोहोरिरहन्छन् कि तिनीहरु हाम्रा लागि सामान्य भन्दा सामान्य बन्ने गर्छन् । बिदेशबाट आएका कलहरु चोरीका नेपाली नम्बर हुनु मेरो लागि मात्र होइन, आम नागरिकका लागि पनि अतिसामान्य भइसक्यो । मेरो मोबाईलमा पनि दर्जनौ यस्ता नम्बरहरु आउँछन् जुन कल लगमा अर्को नम्बरले मेटाएर जान्छ । नढाटी भन्दा मेरो लागि पनि यो कुरा सामान्य भईसकेको थियो । एकाएक यो चोरी मेरो लागि अलिक फरक र बिशेष पनि यो कारण भयो कि यसको तह र क्षेत्र बढि नै संवेदनशिल छ । यो कुरा खुलाउँनु भन्दा अगाडी केहि कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ । जहाँसम्म यो नम्बरको सवाल छ यो आधिकारिक पनि हुनसक्छ । तर दुइकल फरक फरक नम्बरबाट आएको कारण मैले यसलाई शंकास्पद रुपमा लिन बाध्य भए ।
गुगलको एकाउण्ट खोल्ने क्रममा मैले पुरानो इमेल राख्नु पर्ने ठाउँ खाली छोडे । जसका कारण गुगलले मसँग फोन नम्बर माग्यो । मैले मेरो मोबाइल नम्बर दिए । केहि समय लगत्तै मेरो मोबाइलमा पुर्वाञ्चलको मोबाइल नम्बरबाट कल आयो । जब कल उठाएँ, त्यो कल पुर्वाञ्चलबाट आएको नभएर गुगलबाट आएको थियो । त्यो कलमा महिलाको आवाज आयो र दुई पटक सम्म त्यो आवाजले एउटै एक्टिभेसन कोड दोहो¥यायो । जब सर्वरको कारणले त्यो एक्टिभेसन कोडले काम गरेन । मैले पुनः त्यही प्रोसेस दोहो¥याएँ । र, पुनः गुगलबाट नयाँ नम्बरबाट महिलाको आवाजमा एक्टिभेसन कोड आयो । त्यसरी आएको मोबाईल नम्बरहरु क्रमशः ९८४२३५७२१६ र ९८४९५९१७८३ थिए ।
अन्त्यमा सबैलाई यो प्रश्न । आखिर यी नम्बरहरु कस्का हुन् ?
This entry was posted on July 17, 2010 at 10:02 pm	and is filed under सूचना प्रबिधि. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
3 Responses to “कस्को हो यो मोबाइल नम्बर ?”
kashi ko pani hoina